I-China Single Side Side Bracket Formwork ifektri nabahlinzeki |I-Lianggong
Ibakaki elinohlangothi olulodwa luwuhlelo lwe-formwork lokusakazwa kokhonkolo odongeni olunohlangothi olulodwa, olubonakala ngezingxenye zalo ezitholakala endaweni yonke, ukwakhiwa okulula nokusebenza okulula nokusheshayo.Njengoba ingekho induku yokubopha odongeni, umzimba wodonga ngemva kokuphonswa awunamanzi ngokuphelele.Isetshenziswe kabanzi odongeni olungaphandle lwegumbi elingaphansi, indawo yokuhlanza indle, umgwaqo ongaphansi komhlaba kanye nokuvikela umthambeka oseceleni komgwaqo nebhuloho.
Ngenxa yomkhawulo wendawo yezindawo zokwakha kanye nokuthuthukiswa kobuchwepheshe bokuvikela umthambeka, ukusetshenziswa kukabakaki ohlangothi olulodwa lwezindonga ezingaphansi kuya ngokuya kuvame.Njengoba ingcindezi yangemuva kakhonkolo ingakwazi ukulawulwa ngaphandle kwezinduku zokubopha odongeni, kubangele ukuphazamiseka okukhulu ekusebenzeni kwe-formwork.Amaphrojekthi amaningi wobunjiniyela asebenzise izindlela ezahlukahlukene, kepha ukuwohloka kwefomu noma ukuphuka kwenzeka njalo.Ubakaki ohlangothini olulodwa owenziwe yinkampani yethu wenzelwe ngokukhethekile ukusiza isidingo esizeni, futhi uxazulula inkinga yokuqiniswa kwe-formwork.Idizayini ye-formwork yohlangothi olulodwa inengqondo, futhi inezinzuzo zokwakha okulula, ukusebenza okulula, isivinini esisheshayo, ukuthwala umthwalo ozwakalayo nokonga umsebenzi, njll. Ukuphakama okuphezulu kokuphonswa ngesikhathi esisodwa kungu-7.5m, futhi kuhlanganisa okubaluleke kangaka. izingxenye ezinjengobakaki ohlangothi olulodwa, i-formwork kanye nesistimu ye-anchor.
Ngokusho kwengcindezi eyandayo kakhonkolo esanda kufakwa ngenxa yokuphakama kwezinhlelo ze-formwork zohlangothi olulodwa ezikhiqizwa izinhlobo ezahlukene zikakhonkolo.
Ngokusho kwengcindezi yekhonkrithi, amabanga okusekela kanye nohlobo lokusekelwa kunqunywa.
I-Lianggong Single Side Formwork System ihlinzeka ngokusebenza kahle okukhulu nokuqedwa okuhle kakhulu kokhonkolo kwesakhiwo ekwakhiweni kwezakhiwo nemisebenzi yomphakathi.
Ngokusebenzisa i-Lianggong Single Side Formwork System alikho ithuba lokwakha izakhiwo zekhekheba lezinyosi.
Lolu hlelo luqukethe iphaneli yodonga oluhlangothini olulodwa kanye Nebakaki Elinohlangothi Olulodwa, olusetshenziselwa ukugcina udonga.
Ingasetshenziswa kanye nesistimu ye-formwork yensimbi, kanye nohlelo lwamapulangwe olufika ku-6.0m ukuphakama.
ISingle Sided Formwork System nayo isetshenziswa emkhakheni wokhonkolo oshisisa kancane.Isb ekwakhiweni kwesiteshi sikagesi lapho udonga lujiya luba lukhulu kangangokuthi ukunwetshwa kwezinti ezithayi ezizokwenzeka kusho ukuthi akusasebenzeki ngokobuchwepheshe noma ngokomnotho ukubeka ngamathayi.
Okwedlule: Isikrini Sokuvikela kanye Nenkundla Yokuthulula
Olandelayo: I-Hydraulic Tunnel Linning Trolley